दाह्री ग्याङका युवालाई भेटे प्रधानमन्त्रीले « epurwa
दाह्री ग्याङका युवालाई भेटे प्रधानमन्त्रीले
प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ११:४१
झापा । सामाजिक सञ्जालमा देखिने दाह्री ग्याङका युवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवासा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र युवाहरूबीच भेट भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा तस्बिर राख्दै दाह्री ग्याङसँगको भेटबारे जानकारी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्- राष्ट्रका लागि युवा- दाह्री ग्याङसँगको भेट।
दाह्री ग्याङका युवाले प्रधानमन्त्रीलाई किन भेटे त?
उक्त भेटमा सहभागी भएका युवा लेनिन बिष्टले राष्ट्रका लागि युवा भन्ने अभियानमा रहेका युवाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बताए।
‘यो अभियानमा युवा डाक्टर, इन्जिनियरका सहित १७० वटाजति संघसंस्था छन्, त्यसमध्ये दाह्री ग्याङ पनि एउटा हो,’ बिष्टले भने,‘हाम्रो अभियानमा रहेका युवाहरूले रकेट बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिन बालुवाटार गएका हौं।’
राष्ट्रका लागि युवा अभियानले वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनको जन्मदिनको अवसरमा मार्च १४ मा आफूले बनाएको रकेट सार्वजनिक गर्न लागेको उनले बताए। त्यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए।
अनि दाह्री ग्याङ?
दाह्री ग्याङ पनि आफूहरूले सामाजिक काम गर्नका लागि बनाएको बिष्टले बताए।
‘एकचोटीमा दाह्री काट्दा सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। बरू एकचोटी दाह्री नकाटौं र जोगिएको पैसाले समाजसेवा गरौं भनेर यो ग्याङ बनाएका हौं,’ उनले भने,’यसमा अहिले ३ हजार जति सदस्य हुनुहुन्छ।’
झापा । गएरातिदेखि परेको वर्षाका कारण कनकाई नदीमा आएको बाढीले कम्तीमा एक सय घर डुबानमा परेका छन् । बाढीको भंगालो
झापामा भारी बर्षा : तटबन्ध र ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जतात्यतै जलमग्न, सयौँ घर डुबानमा
झापा । जब घरआँगनमा पानी पस्छ, त्यही वेला डुबानमा परेका पीडित बासिन्दाको चेत खुल्छ। अनि हारगुहार गर्न थाल्छन्, ‘घरआँगनमा पानी
सुनसरी । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–४ मा बन्चरो प्रहार गरी भाईको हत्या गर्ने दाजुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बराहक्षेत्र
बिर्तामोड (झापा) । पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा बिर्तामोडले नयाँ परिचय बनाएको छ । तीब्र शहरीकरणतर्फ उन्मूख बिर्तामोड नगरपालिकालाई छोटो